Golaha Wasiirada Puntland. Qaybtii II. Qalinkii Prof. Farjac | raascasayrmedia.com
← Wasaarada arimaha dibada ee maraykanka oo soosaartay warbixin ku’aadan kaganacsiga dadka tahriibka iyo askaraynta caruurta‏
Madaxweyne Shariif oo gaaray Qaahira. →
July 17, 2010 · 2:15 am
Golaha Wasiirada Puntland. Qaybtii II. Qalinkii Prof. Farjac
Marka hore waxaan raali gelineyn u direynaa wasiirada ka xumaaday koofaarta dawladu la baxday ee “Naas iyo Nikaax”. Qaar idinka mid ah waxay jeclaysteen in la isticmaalo eraya kale sida “Dawlada Qawleysatada Puntland”, “Hogaanka Tambalada Puntland”, “Taliska Burcadda Puntland”, iwm. Saas darted waxaa koofaartii hore ee loo yaqaaney loo duway ”Qawleysatada Puntland”, waxaanuna raali gelin u fidineynaa wasiirada iyo ku xigeenada ka carooday naanaysta qurba joogtu u bxisay taliska Puntland. Arrinta kale ee aanu ka raali gelineyno tirada waa tirade wasaaradaha Puntland oo xaqiiqdii nala batay iyagoo aan waxba qaban hayn. Federalkaa ka dartay oo dibi dhashay. Waxay wasaarada la magacaabay ay ku bilaabeen 39 wasaaradood oy hogaaminayaan 39 wasiir iyo 88 wasiir ku xigeen. Waana dawlad ku kooban Villa Somalia. Lama yaabin xukuumada TFG tiradeeda waayo rajo qof ka qaba ma jiro, qof walbana waa ogyahay in ay dhalanteed tahayna. Baarlamaankeedaba waa 550, kuna socda in uu gaaro 1,100. hase yeeshee Xukuumadaha Puntland iyo Somaliland raja weyn baa laga qabaa in ay toosaan.
Maqaalka qaybtiisaan labaad waxaan kaga munaaqashooneynaa saddex arrimood oo wasiirada iyo ku xigeenadoodu ka wada siman yihiin sida (amnigooda, Qorshe la’aanta iyo hanti dhawr la’aanta wasaaradohooda).
Maxaa loo soo weeraraa xuduudaha Puntland? Tirada Gaar hayayaasha Wasiirada
Waxaa caada noqotay in markii la magacaabo wasiir, wasiir ku xigeen ama qofba jago madaxnimo lagu magacaabo ay qortaan tira farabadan ee gaar-hayayaal, ilaalo iyo in ay kiraystaan gawaarida dagaalka iyaga lagu ilaaliyo (Teknikals). Qiyaasta dhex-dhexaadka ah ee wasiir ama ku xigeen ilaalisa iyo kuwa guriga u jooga waxay dhantahay 120 askari iyo afar technicals. Maadaama askar maroodiga-marya calas aaney haysan tababar hubka iyo anshaxa iyo dhaqanka askrnimada, waxaa badanaaba dhacda in ay xabaduhu micne la’aan uga fakadaan oo badankood iyagu hubkooda isku dhiftaan dad ay wax ka difaacaan iskaba daaye. Halkii ay qoryaha ka sii jeedin lahaayeen madaxda ay ilaalinayaan, waxaad arkeysaa qoryo ku sii jeeda wasiirka ama ku xigeenka. Hadaad maqashaan xabad baa askariga kaga fakatay wasiirkii, ha la yaabin, isagaa wasiir ama ku xigeenku lugahooda ku raadsaday belo. Su’aaluhuse waxay yihiin: Ma waxaa wasiirada laga ilaaliyaa shicibka ay wax u qaban lahaayeen? Maxay is dhaamaan wasiirada iyo ku xigeenada dawlda Federaalka iyo kuwa Puntland? Weli ma maqasheen wasiir soo booqday meelaha dhibaatada (sida biya la’aanta, caafimaad la’aan, waxbarasho la’aanta, abaaraha, daadadka, duufaanada, colaad sokaye ee beelaha) ka jirtaan oo u baahan in wax loo qabto? Maxay wasiirada iyo ku xigeenadoodu ka qabtaan Garoowe? Yayse askrtaan faraha badan ka ilaalinayaan? Ma horay bay dembi u soo galeen?
Bal idinkuba xisaabiya ciidanka ilaaliya wasiirada iyo ku xigeenadooda. Hadii aad 120 askari ku dhifato tirade wasiirada iyo ku xigeenadooda oo kor u dhaaftay 53, waxay tiradu tahay 6,360 askari. Tirada teknikals kana waxay tahay 4 X 53 =212 Teknikals.
Amniga iyo sirta Puntland awgeed, anagu idiin sheegi meyno tirade gaarhayayaasha, ilaalada, askar maroodiga, marya calasta hor orda madaxda qaybaha kale sida taliyayaasha saldhigyada booliska, taliyayaasha ciidamada sirdoonka gobolada, guddoomiyayaasha gobolada iyo ku xigeenadooda, guddoomiyayaasha degmooyinka iyo ku xigeenadooda, madaxda ciidamada madaxtooyada, ehelada madaxweynaha qaarkood, lataliyayaasha gaarka ah ee madaxweynaha, madaxda ciidanka dahsoon ee sirdoonka siyaasadeed ee madaxweynaha, madaxda canshuur soo hoyayaasha, xubnaha maxkamada sare ee Puntland, af hayeenka wakiilada beelaha, xubnaha ugu muhimsan baarlamaanka, madaxda burcad badeeda dawlada Puntland iyo saaxiibadayada faraha badan oo aanu idinka qarinayno.
Hadaba tirade ilaalisa madaxdaas waxay ku soo shan jibaarantaa tirade ilaalisa wasiirada iyo ku xigeenadooda.
Tirada askartaas iyo kirada teknokalska kharajkeeda waxaa laga bixiyaa dakhliga Puntland ka soo gala canshuuraha.
Hadaba marka aad isku dartiin tirooyinka aan idiin soo bandhignay, maskaxdiina ka dhamaysta sababaha loo difaaci la’yahay xuduudada Puntland.
Tala ahaan hadii loo soo jeediyo in askartaas iyo teknikaliskooda loo diro difaaca xaduudada Puntland, ilbiriqsi in ka yar ayaa lagu weynayaa askarta iyo teknikaliska.
Ceeb waxaa ah marka aad aragto musawirada wasiirada, ku xigeenada, ama madaxda kale oo ay ku hareeraysan yihiin, ama ka horeyaan kana dambayaan askar fara badan. Su’aalo fara badan baa kugu dhalanaya. Ma isugu faanaan askarta hor yaaceysa?
Talo waxaanu ugu soo jeedin lahayn, laga bilaabo madaxweynaha in ay askarta ilaalisa ka dhigaan lebiska askarta oo ay u geliyaan dhar shicib. Madaxweynuhu askartiisa wuxuu u gelin karaa lebiska wasiirada, jaakadaha iyo nigteinada (necktie) si aan looga garan dadka caadiga ah, qoryo fududna hoosta ha gashadaan. Ku cibra qaata wadamada horuumaray madaxdooda tirade ciidamada ilaalisa. Madaxweynaha Mareykanka laba nin ayaa ilaalisa, iyaguna dhar askareed ma wataan ee wasiirada iyo madaxda kale ayey u egyihiin.
Fadlan, waad cara dhowdihiine, ha ka caroonina hadi talo wax ku ool ah la idiin soo jeediyo. Hadaad shicibka la idinka filayey in aad caawintiin aad sidaa uga baqaysiin, iska daaya jaga doonidda oo iska casila meelaha la idinku magacaabay. Lama yaabanin in wasiiradu ay askar farabadan isku hareerayaan. Hadii odaga qoysku durbaanka tumo, caruurta iyo haweenka maxaad ka maleysaneysiin? Sawirkaa ku quuso.
Maadaama aaney Puntland qorshaysan in ay difaacato xuduudadeeda, maxaa u diiday in ay heshiis nabadeed la gasho beelaha iyo dawladaha ay soohdinta la leedahay? Nabada soohdintu waxay dan u tahay intii wada jaar ah. Waayo colaada iyo dagaalada waxaa ku dhinta dad fara badan, waxaana baxa kharaj lagu horuumarin lahaa danaha bulsho iyo dhaqaale.
Waxaanu aaminsannahay in heshiis nabadeed oo waara laga dhalin karo Puntland iyo Somaliland oo dad walaala ah ku wada nool yihiin. Colaada labada dawladood waxaa dani ugu jirtaa dad aad u tira yar. Hadey labada dawladood doonayaan dad u kala dab qaada, ha nala soo xiriiraan.
Hadaba gunaanad ahaan, maxaanu madax uga dhigan weyney wasiiro aan u baahnayn askar hor yaacda?
Qorshe la’aanta: Qorshow maxaad tahay?
Qorshe waa qodob muhim u ah horuumarinta iyo dadaalka la doonayo in la gaaro. Waxwalba qorshe in ay yeeshaan ayaa haboon, waayo, qorshuhu waa aalad la iskula xisaabtamo. Sannadku markuu dhamaado ayaa wasaarad kasta laga dhawraa warbixin ku saabsan sida ay wax u qabteen. Imisaa ka hirgashay qorshihii iyo dakhligii loo qoondayey wasaarada? Maxaa hirgeli waayey? Maxaa u sabab ahaa dib u dhaca iyo hirgelin la’aanta? Sidee looga gaashaamankaraa fashilka ku yimid qorshaha sannadka?
Wadan walba wuxuu samaystaa qorshe gaaban (hal sano), iyo qorshe fog (Shan sano iyo in ka badan). Wasaarad walba iyo hey’ad kasta waxay samaysataa qorshaha ay dooneyso in ay hirgeliso, waxayna soo bandhigtaa himilooyinka ay dooneyso in ay higsato. Qorshayaashaas waxaa la isugu geeyaa goob qura. Ka dib waxaa la soo bandhigaa dakhliga la hayo, waxaana lagu saf-jaraa qorshaha. Hadii dakhligu ka yar yahay kharajka, waxaa dacalada laga jaraa qorshayaasha hey’adaha, si wixii faaja-faajood dhaafka ah loo yarayo. Hadii baahidu xaqiiq tahay ee mashruuc kasta loo baahan yahay, qorshaha waxaa loo kala hormariyaa hadba ahmiyadda mashaariicdu u leeyihiin bulshada. Way dhacdaa in mashaariicda ay wataan xubnaha ku xoog weyn maamulka ay mudnaanta koowaad yeeshaan in kasta oy ka muhimad yaryihiin baahida mashaariicda dadka kale wataan.
Aragnay dad badan oo loo magacaabay hogaaminta wasaaradaha, hase yeeshee, ilaa haatan ma jirto wasaarad ka tirsan Puntland oo leh qorshe horuumarineed. Inta keliya la qorshayo waa mushaharooyinka shaqaalaha wasaaradaha. Waxaanu wasiirada iyo ku xigeenadooda ka codsaneynaa in ay wasaaradooda u samayaan website, ayna ku soo qoraan oo soo bandhigaan qorsha sannadeedka iyo qorshaha mudada fog. Aragte inta wasaaradood ay leedahay Puntland, hadaba baara inta wasaaradood oo leh website. Waxaa idiin cadaaneysa in ay tira yaryihiin. Weliba website yada waxaa samayey maamulkii hore, mahadi haka gaartee. Maamulkaanow maxaad u qabatay Puntland? Ma qarsoodi baanu weligeen ku jireynaa? Ma shicibka Puntland baad wax ka qarsaneysiin? Wax la umba-umbayo waykacaa ka roon. Wax la qariyo qurme ama qubte. Waxaanu u baahanahay waxa afka qalaad lagu yiraahdo “Transparancy”. Hufnaanta maamulku wuxuu ku jiraa daacadda. Ma haboona “Aynu bakhtiga qalano, mindiyahana kala qarsano”.
Qorshuhu wuxuu sahlaa sidii la isugu dhafi lahaa dakhliga caatada ah, dadka aqoonta u leh fulinta qorshaha iyo waqtiga lagu fulinayo. Waana warqad dhaxal gal ah ee lagu xisaabtamo. Hadaba hey’adii aan website lahayn oo aan soo bandhigin qorshaheeda waxaanu tuhmeynaa in ay shicibka dan u hayn. Nin gunti xumi inuu wax qarsanayo ayaa la moodaa. Sannadka aakhirkiisa wasaaradii aan lahayn website, aan ku qorin qorshaheeda, miisaaniyadda noocyada ay u kala baxdo, mashaariicda ay qabaneyso, qaybaha wasaarada iyo agaasimayaasha magacyadooda, wararka wasaarada, goobaha mashaariicdu ka fuleyso, goobaha madaxdu soo booqato iyo wixii warar muim ah aan ku soo qorin, waxaa noo cadaaneysa in aaney shicibka Puntland dan u hayn.
Hanti dhowr la’aanta
Hanti-dhawr iyo xisaabi xil ma leh waa arrin muhim u ah dawlada. Xatooyada xollaha ummadda ma aha wax la idinku tuhmayo keliya. Shicib weynuhu waxay wasiirada qurba joogta u aragtaa in ay yihiin dad soo shaqa tegey oo doonaya in ay ka xoolaystaan Puntland. Hadaba, ogolaada in hey’ad madax banaan idin baarto. Taariikh ahaan waxaa madaxweynuhu magacaabi jirey guddi uu soo xusho, kuna magacaabi jirey guddiga hanti dhawrka baaraya musuq-maasuqa. Guddi isagaba lagu soo xulay musuq-maasuq ee la yiri hanti-dhawr u noqo musuq-maasuq kale wuxuu ku dhamaadaa iyagoo qaata laaluush. Weli lama hayo guddi hanti-dhawr oo soo saaray musuq-maasuq iyo hanti dawlo oo la dhacay. Weli lama soo xirin qof dhacay xoolaha dawlada. Inta kale adiguba madaxaaga ka dhamayso.
Waxaa haboon in la samayo guddi ka madax banaan maamulka oo ka kooban qurba joogta Puntland, ganacsatada, culamaau’diinka iyo saxaafada xorta ah. Guddigaas oo xor u ah in ay baaraan wasaaradii ay doonaan iyadoo aan war gelin goorta ay u bareeraan baaritaanka si aan buugta loo Karin (before they cook the books)
Qaybta saddexaad waxaanu ku soo bandhigeynaa shaandhaynta wasiirada iyo ku xigeenada, shuruudaha dallacaada shaqaalaha wasaaradaha, magacaabida madaxda dharka carbeed qaata, raiisul wasaaraha Puntland iyo arrimo siyaasadeed ee wasaaradaha.
Shaandhaynta Cusub ee Soo Socota
Waxaa na soo gaaray warar sheegaya in shaandhayntii ay soo baxayso aakhirka usbuuca. Hadaba markaanu ogaaney dadka la soo wado waxaa noo cadaatay in kuwa la soo wado ay ka liitaan kuwa hadeer haya. Waxaa haatan la soo wadaa kuwa ka daran qurba joogtii aanu dhaliileyney.
Codka Runta Qayaxan
One response to “Golaha Wasiirada Puntland. Qaybtii II. Qalinkii Prof. Farjac”
Meeshan hadaan sii fiiriyey waxaa ku barooranaya nin miskin ah o madaxa loga jiro rabana inuu cid maamulo hadii adiga aad mesha timi halcodna weyday ma inaad mas,uliyinta kalle caydobaa hadaadse rabto inad wax mucaarado wax jira aya laga hadlaa sida nin ragana loo hadlaa